Home News Beesha Mareexaan oo go’aan ka qaatay MW Farmaajo iyo talabooyin durbadiiba la...
Beesha Mareexaan oo go’aan ka qaatay MW Farmaajo iyo talabooyin durbadiiba la qaaday!
Beesha Mareexaan ee uu ka dhashay Madaxweyne Farmaajo laguna yaqaano wadaninimo iyo kaalintii ay ku lahaayeen soo dhicinta xurnimadda Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka badbaadsadaan magacooda iyo sharaftooda Madaxweyne Farmaajo. MW Farmaajo oo xiligii doorasha istcimaalay magaca iyo karaamada beesha Mareexaan ayaa hadda magacii beesha dhulka la galay. Dhaqan xumida, balan lan’aanta iyo dalka meesha uu ku wado ayaana keentay in beesha Mareexaan ka tashato sidii ay isaga beri yeeli lahaayd magaca xumidda MW Farmaajo.
labadii asbuuc ee ugu dambaysay waxaa magaalada Neyroobi ee dalka Kenya ka socday shirar ay soo qaban qaabiyeen salaadiinta, aqoonyahanadda iyo qaar ka mida madaxa dhanka ee ka soo jeeda beesha. Shrikaas ayaa looga hadlay hoogaan xumida MW Farmaajo iyo dariiqa uu ku wado dalka. Waxaa la islagartay in hogaanxumidda MW Farmaajo iyo bur-burka qaranimada Soomaaliya ay si toos ah u taaban dononto mustaqbal dhaw iyo kan dheer ee meesha Mareexaan. kulamdaan ayaa waxaa ka soo qayb galay Ra’iisal Wasarayaashii hore Saacid Shiikhdoon iyo Cabdwali Shiekh.
Waxaa ay beesha isla garatay in fartiin kama danbeeysa lah oo diro Farmaajo. Waxaa maanta ku wajahan magaalada Muqadishu wafdi uu hogaaminayo Ra’iisal Wasarahii hore Saaciid. Waxaana la filayaa in ay fariinta gaarsiiyaan MW Farmaajo. Dhanka kale xildhibaano ka soo jeeda beesha Mareexaan ayaa ayagana dhankooda ka bilaabay in warbaahinta la hadlaan kana hadlaan dhibka Farmaajo ku hay dalka iyo dadka.
Previous articleMuxuu salka ku hayaa Qilaafka cusub ee Dowladaha Soomaliya iyo Jabuuti
Next articleDowladda Itoobiya oo sheegtay qoondada shidaalka ay Soomaalida yeelanayso in uu yahay 5%
dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo Marko ka dhacay
Maleeshiyo Beeleed Kheeyre dhawaan heshiisiiyay oo Dagaalamay & qasaaro culus